YKKO စတိုင် ကြေးအိုး | Wutyee Food House
ရ။ ကြေးအိုး တခွက်စာ ပြင်ဆင်လို့ရပါပြီ။ တစ်ယောက် ကြာဇံ၊ မုန့်ညှင်းရွက်၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ဟူစိုင်များကို ဇကာထဲထည့်ပြီ ကြေးအိုးပြုတ်ရည်ဖြင့် အနည်းငယ် စိမ်ပေးပြီ ပြန်ဆယ်ထားပါ။
Chaw Chaw Su says:
I loved it, so I will be cooked it.Thanks.
Plz try sis. You will really like it 🙂
Myat Pin Lay (TIna) says:
po pay diatwet kyay zu tin pa dal
thanksalot nyi ma lay your posted every food are delious
taw taw koung hmar pa.
LIN THET PAING says:
so good. thanks alot
sis ရေ .. အဲ့လို အစားအသောက်လုပ်တာလေးတွေကို ဒီလိုဝက်ဘ်ဆိုဒ်ထက် FB လေးထောင်ပါလားဟင် ..ခုလဲ ဒီပိတ်ရက်ကျရင် ကြေးအိုးလုပ်စားကြည့်မယ် ..ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့် 🙂
Here is Wutyee Food House Facebook: http://www.facebook.com/pages/Wutyee-Food-House/280091162578/. Thanks
wow thank you pig yeee…. i will surely cook at christmas holiday time 😀
ကိုယ် လုပ်စားကြည့်နော်။ အရမ်းစားကောင်းတယ် 🙂
anty sabai says:
Thank you so… much.I like so much so I will exactly
Plz try it, Aunty Sabai! 🙂
ကြေးအိုးလုပ်စားချင်နေတာ ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ မသိလို့အခုသိပြီ ကျေးဇူး အမရေ
အမရေ ဟူစိုင်ရွက်ဆိုတာဘာလဲမသိဘူး အင်္ဂလိပ်နာမည်လေးပြောပြပေးနော်
ဟူစိုင် လို့ပဲခေါ်ပါတယ်။ City Mart မှာရော၊ ဈေးမှာရော မေးဝယ်လို့ရပါတယ်
ဟူစိုင် (ဟူစိုင်ကွစိုင်) called CHIVES.. ကြေးအိုးက ဟူစိုင်ကွစိုင်မပါရင် ကြေးအိုးမဟုတ်သလိုပဲ..
ွှthanks for info
I will cook today evening! 😀
တဆိတ်လောက် ဟုစိုင် ဆိုတဲ့အရွက်ကို အင်္ဂလိပ်လိုသိရင်ပြောပြပေးပါဦး။
ဟူစိုင်ကို အင်္ဂလိပ်လိုလည်း ဟူစိုင်လို့ပဲ ခေါ်ပါတယ်။ တရုတ်ဆိုင်မှာ ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်.. ဟူစိုင်က မထည့်လည်းရပါတယ်၊ ၀တ်ရည်က ကြိုက်လို့ ထည့်ချက်ထားတာပါ။ Thanks
I think it is also called Chinese Chives or Garlic chives.
Hote. ဆောင်းတွင်းအေးအေးလေးမှာ ကြေးအိုးလေး လုပ်စားကြည့်နော်
တွဲဖက်စားတဲ့အချဉ်လေးကလဲအတော်အရေးကြီးပါတယ် တင်ပေးပါအုံး နောက်ပြီး ကြက်ကြေးအိုးပါပေါ့ thanks.
၀တ်ရည်ကတော့ ရောပြုတ်ထားတာပါ။ ဆူမှထည့်ပြုတ်လည်း ရပါတယ်
ဟုတ်ရပါတယ်။ ၀က်ချဉ်ဆီရိုးတွေ ပြုတ်ရင် ဒီလို အရည်နောက်နောက်လေးရပါတယ်။ ၀က်နံရိုးပြုတ်ရင် အရည်အကြည်ပဲရပါတယ်.. ၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးပါ
ကျေးဇူးပဲ။ YKKO ကြေအိုးကိုကြိုက်လို့လုပ်စားကြည်မယ်နော်။
Plz try sis
I just finished cooking according to your recipe and now eating. 😀
It’s really delicious. Thanks sis.
Really glad to hear, you like it… 😛
ကြေးအိုးချက်နည်းတင်ပေးတဲ့အတွက် မ၀တ်ရည် ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။
အမကျွန်တော်ကို New Year မှာအကင်လုပ်စားချင်လို့ အကင်ဆိုင်တွေမှာ၊ ဘီယာဆိုင်တွေမှာ လုပ်တဲ့အကင်လုပ်နည်းလေးတွေတင်ပေးပါလား၊ ကြက်တောင်ပံတို့၊ ၀က်နံရိုးတို့၊ နောက်ထပ် အသီးအရွက်လေးတွေပါ၊ ငါးကင်နည်းလေးတွေပါ တင်ပေးပါနော်၊ အကင်ဆိုင်တွေမှာ မဆလာနံ့မွှေးမွှေးလေးနဲ့ ကင်သလိုမျိုးပေါ့။
myat myat lwin says:
အမကိုလည်း သူ.အတိုင်းဘဲ အကင်နည်းလေးတွေမေးပို.ပေးပါနော် YKKO က ငါးကင်နည်းနဲ.တွဲစားတဲ.အချည်ဖျော်နည်းလည်းသိချင်ပါတယ်။ ကြေးအိုးနဲ.တွဲစားတဲ.အချည်ဖျော်နည်းလည်းသိချင်ပါတယ်။ တောင်းတာတွေများသွားပြီ။ ကျေးဇူးနော်
ကြေးအိုးနဲ့ လိုက်မယ့် ၀က်ဆာတေးကင် လုပ်နည်းပါ http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=1217/ အချဉ်ဖျော်နည်းတွေလည်း ကြိုးစားတင်ပေးပါမယ်.. 🙂
အမ အချည်၇ည် လုပ်နည်းလေးပါတင်ပေးပါနော်….ကျေးဇူးပါ
I will try to post later !
အမေ၇.. ယိုးဒယား ကြက်တံဆိပ်ဆိုလား…. အိုက်အချည်၇ည် အ၇မ်းကောင်းတယ်ပြောတယ်.. အဲဒါသိပါလားအမ ..သိ၇င် ဘယ်မှာဝယ်၇မလဲလို့ ပါ..ကျေးဇူးပါ
ကြေးအိုးနဲ့ လိုက်တဲ့ ငရုတ်သီး ဆော့ကို City Mart မှာ ၀ယ်လို့ရပါတယ်
Hi is it possible to get this in English 🙁 my laptop ka zawgyi font ma shi lo sis. thanks alot naw. And I love you wat tar pone yay gyi 😀 i trried coooking it….really delicious.
I will try post recipes to English version soon.! 🙂
Eddy Tun Aung says:
မမ၀တ်ရည်က သဘောကောင်းတယ်နော်… စာအုပ်ထုတ်ပေမယ့် Blog ကိုလည်းပေးဖတ်တယ် တချို့ ဟင်းချက်နည်းထုတ်တဲ့ blogတွေဆို ပိတ်ထားတယ် ဖတ်လို့ မရဘူး စာအုပ်မထွက်ခင်အထိတော့ဖတ်လို့ ရတယ် နောက်ပိုင်းဖတ်လို့ မရတော့ဘူး
မမ၀တ်ရည်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမရဲ့ blog ကို ဖတ်ပြီး အိမ်မှာပဲချက်စားတော့တယ် Peninsular plazaမှာတောင်သွားမစားတော့ဘူး
မမ၀တ်ရည် ကျန်းမာပြီး ပျော်ရွှင်ပါစေ
ကျေးဇူးတင်ပါသည် အခုလိုပြည့်စုံအောင်ဖေါ်ပြပေးတဲ့ အတွက် ……….
I Like it so much. Thanksalot for your sharing sis.
Plz also try naw sis
Khwa Nyo says:
အိမ်က အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေက ဆီးချိုရောဂါရှိလို့ ဆိုင်မှာစားရင် မတည့်တာများတယ်။
Glad to hear, you all like it! 🙂
ဟုတ်ကဲ့ sis ပဲထမင်းလုပ်နည်း http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=4787/ မှာတင်ပေးထားပါတယ်.. 🙂
ကျေးဇူးပါ အိမ်မှာလုပ်စားအုံးမယ် ညီမရေ၊ ဒါနဲ့ အပန်းမကြီးရင် ဟော့ပေါ့ဟင်းရည်ချက်နည်းနဲ့ ဆော့စ်ဖျော်နည်းလေး တင်ပေးပါအုံးနော်
၀က်ရိုးပြုတ်အစား ကြက်ရိုးပြုတ်အစားသုံးရမှာပါ။ အသားလုံးလည်း တူတူပဲ ၀က်သားနေရာမှာ ကြက်သားကို သုံးပြီ လုပ်ရုံပါပဲ…
Phoo Ngone Khin says:
ကြေးအိုးကို ကြက်သားနဲ့ လုပ်စားချင်ရင်ရော ဘယ်လိုလုပ်ရလဲညီမရေ….
၀က်ရိုးအစား ကြက်ရိုးနဲ့ ပြုတ်ပြီ ၀က်သားလုံးနေရာမှ ကြက်သားလုံးလေးတွေ အစားထိုးချက်စားရင် ရပါပြီ…
ကြေးအိုးဆီချက်လုပ်နည်း တင်ပေးပါဗျို့ … တင်ပြီးသားရှိရင်လည်း Link ပေးပါဗျို့ … ကျေဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Bro ရေ ကြေးအိုးလုပ်နည်းအောက်ဆုံးမှာ ကြေးအိုးဆီချက်လုပ်နည်းပါ ရေးထားပါတယ်။
ကျေးဇူးပါ မ၀တ်ရည် 😀
Please also try 🙂
Kyu Kyu Hlaing says:
ဟုတ်ကဲ့ လုပ်စားကြည့်နော်။ ဆိုင်ကအတိုင်းပဲ စားကောင်းတယ်.. 😀
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်။ Hot Pot လုပ်နည်းလေးတင်ပေးပါခင်ဗျား။
ဟုတ်ကဲ့။ တင်ပေးမယ် တင်ပေးမယ်နဲ့ ခုထိ မတင်ဖြစ်သေးဘူး.. I will try post soon 🙂
Tin Thu Zar Win says:
Thanksalot. This is really I want to know how to cook. Be happy.
Gipsy Devil says:
မမ ၀တ်ရည် ၀က်သားမစားလို့ ကြက်နဲ့ နည်းလေးတင်ပေးပါလားဟင်?
ကြေးအိုး လုပ်တဲ့အခါ၊ ၀က်ရိုးအစား ကြက်ရိုးနဲ့ ပြုတ်ပြီ ၀က်သားလုံးနေရာမှ ကြက်သားလုံးလေးတွေ အစားထိုးချက်စားရင် ရပါပြီ… ကျန်တာတွေက အတူတူပါပဲ…
Khin Yamin says:
YKKO က အချည်ရည်လုပ်နည်းလေးပေးပါလားလို့။
မ၀တ်ရည်ရေ..ချက်စားပြီးပြီ..အရမ်းကောင်းတယ်..အရသာကYKKO အတိုင်းပဲ ဒါပေမယ့်..ဘာလိုသွားလို့လဲမသိဘူး..၀က်သားကဖွဲတယ်တယ် ဖြစ်နေတယ်..အကြံပေးပါဦး
if you have leisure time, please upload making yogurt! Xo Xo ThZ!!!
I wish you belong to healthy and wealthy life. pls upload! Pls Upload!
ok I will try post later. Thanks 🙂
၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးပါ.. လုပ်စားကြည့်နော်..
U Toe says:
just takeataste from your post photo (hahaha)
i’d like it too much and
will try to teach my filipino cook to do that for
me and some of myanmar crews.
၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးပါနော် ဦးတိုး.. 🙂
အစ်မ ကြက်ကြေးအိုး နဲ့ ကြေးအိုးဆီချက် လုပ်နည်းလေးလည်းး တင်ပေးပါအုံးနော် ………… ^_^ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အစ်မ ……. 🙂
ok I will try to post later 🙂
မ၀တ်ရည်ကို မှီအောင်ကို လုပ်စားအုံးမှာ..ဟိဟိ
haaa.. လုပ်စားကြည့်… YKKO ကြေးအိုးအတိုင်းပဲ စားလို့ကောင်းတယ်… 🙂
thanks you par sister
thanks you par
U Htay nyut says:
ကျုပ်က ဝက်သား မစားတော့ ကျက်သားနဲ့ ချက်ကြည့် ရ မှာ ပေါ့ ကျေး ဇူး ပါ ။
ဟုတ်ကဲ့ ကြက်သားနဲ့ဆိုလည်း စားလို့ကောင်းပါယတ်…
ကြေးအိုးကို တစ်ခါမှ ချက်မစားသေးဘူး
အမက ညီမလေးရဲ့ စာအုပ်လည်း ၀ယ်ထားတယ်။ အမြဲလည်း လိုက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ကြေးအိုးချက်နည်းမှာ သုံးတဲ့ ပဲငံပြာရည်က အကြည်/အနောက်/ကြာညို့ ဘာကို သုံးတာလဲဟင်။ ပြီးတော့ ငါးဖယ်လုံးတာလည်း ညီမလေးပုံလို မဖြစ်ဘဲ ဖြူဖြူ ပွပွကြီး ဖြစ်သွားတယ်။ ဘာမှားသွားလို့လဲ မသိဘူး။ အရသာကတော့ တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အားပေးလိုက်တယ်။ 😛
ပဲငံပြာရည် (အကြည်)ကို သုံးထားတာပါ။ ငါးဖယ်လုံးက ငါးဖယ်စစ်မှ စားလို့ကောင်းတာ။ ဈေးမှာက အစစ်က ရဖို့ ခဲတယ်။ ကြိုက်လို့ ကျေးဇူးပါနော်… 😉
ညီမလေးရေ…. ဘိစကိတ်ကြော် လေးလုပ်စားချင်တယ် တင်ပေးပါဦးနော်
ဒီချက်နည်းက YKKO ကြေးအိုးလိုပဲ စေးစေးလေးနဲ့ အချိုလေးလေး စားလို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အသားလုံး စေးချင်ရင် ကော်မှုန့်ထည့်ရပါတယ်။ အဲဒါဆို စေးစေးလေး ဖြစ်ပါတယ် sis..
YKKO ကြေးအိုးချက်နည်းလေးတင်ပေးတာကျေးဇူးပဲနော်။ ဆောင်းဝင်ခါနီးလေးပူပူနွေးနွေးတစ်ခေါက်လောက်လုပ်စားကြည့်မယ်။ တစ်ခြားစားကောင်းဖွယ်ရာလေးတွေထပ်တင်ပေးအုံးနော်။။။။
ဟုတ်ကဲ့။ လုပ်စားကြည့်ပါနော်။ ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါအုန်းမယ်.. 🙂
ဟုတ်ကဲ့ လုပ်စားကြည့်ပါ sis..
ကျေးဇူးအများကြီတင်ပါတယ်။ ဒီ web side ကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ်။
အားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်.. 🙂
Admin ကိုရတဲ့ ယောက်ျားကတော့ တစ်သက်လုံး ကံကောင်းပြီပဲ။ 🙂
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် မချိုဝတ်ရည်ရေ။ ဟိုတစ်ရက်က အိမ်မှာချက်စားဖြစ်တယ်။ ဟူစိုင်တော့ရှာမတွေ့လိုမသုံးဖြစ်လိုက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းအတိုင်းချက်တာ အရမ်းစားလို့ကောင်းပါတယ်။ အားလုံးလည်းကြိုက်ကြတယ်။ YKKO ဆိုင်ကိုတောင် သိပ်တမ်းတဖြစ်တော့မယ်မထင်ဘူး။ 🙂
ကြိုက်တယ် ဆိုလို့ အရမ်းဝမ်းသာတယ် sis.. 🙂
La Yaitecho says:
မသိ​သေး​သောချက်​ပြုတ်​နည်း​တွေ သိရလို့ ​ကျေးဇူးအများကြီးတင်​ပါတယ်​ မဝတ်​ရည်​
Thank you sis. I like your cooking style.
Now I know the way of cooking kyay-oh.Thanks alot sis.
ကျေးဇူးပါ ဝတ်ရည်ရေ..အရမ်းအရသာရှိမယ့်ပုံပဲ…လုပ်စားဖြစ်အောင်စားပါမယ်…တခုလောက် ဝက်ဆီက ဘယ်လိုလုပ်၇မှာလဲသိချင်ပါတယ်…သုံးထပ်သားဝယ်ပြီး အဆီထုတ်ရမှာလားသိချင်ပါတယ်…ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
I tried cooking this YKKO style kyay oh last night. Thanks to your recipe it was good. But how do I get rid of the pork smell (watanyee nant) in the soup? I had the scum from boiling too, but I can remove them manually. If you have any tricks for scum, please share me.
zinmar myint says:
YKKO စတိုင် ကြေးအိုး | Ohn Phwa says:
[…] Wutyee Food House မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ […]
mi nant thar says:
Credit ပေးပြီး Share ပါရစေ